Xannibaadda Edge Glue, Glue White, Polyvinyl Acetate Glue - DESAY
Soo bandhig tikniyoolajiyadda wax soo saarka caalamiga ah ee horumarsan iyo alaabta ceeriin oo tayo sare leh oo loogu talagalay alaabada xabagta.
diy epoxy cusbi farshaxanka cad re ...
Warqad xabagta caag Printin midabka ...
A + nooca wi wiigga cad ee adag oo adag ...
Super khamriga polyvinyl adag qaro weyn ...
New Fashion Boorka Amniga Gog ...
Customized Clear Anti Fogi Plasti ...
Shiinaha saarayaasha wajiga maaskaro ...
3 caag guntin aan dun lahayn
Budada Buluugga ah ee Bilaashka ah ee Aan-M ahayn ...
galoofka dhammaadka cinjirka Daad ...
S168 silikoon Khatimidii Weather-re ...
Universal Glue / Super SBS All-pur ...
110 nooca kraft warqad koollo li ...
cusbi diy epoxy farshaxanka farshaxanka farshaxan aan ...
110 nooc kraft warqad xabagta dareere ah xabagta dareeraha ah
A + nooc sare oo adag oo cad cad xabagta silsilad buugga silsilad silsilad sidaas ...
Warqad koollo polyvinyl warqad koollo badan oo hufan cor cor xabagta dhumuc weyn ...
Warshad alaabta guriga
Mar-18-2021 Habkan cusub ee polymerization wuxuu albaabka u furayaa antifoulin waxtar badan ...
Mar-18-2021 Dahaarka polymer ee qaboojiya dhismooyinka
Mar-18-2021 Dahaar loogu talagalay dhalinta tamarta qorraxda oo beddeli karta silikoonka
Mar-03-2021 Alwaaxa Xaydha Alwaaxda Oo Aan Ciddiyaha Ama Boolal Lahayn
Mar-03-2021 Polyurethane adhesives - xidigta mustaqbalka ee koollada
Mar-03-2021 Warbixinta Cilmi baarista Epoxy
Abriil-14-2020 Rave dib u eegis
Mar-30-2020 Mar IIBIYO BILAASH AH
Khibrad isku dhafan oo ka badan 10 sano warshadaha xabagta, Desay Chemical ayaa si madaxbanaan u soo saartay qaacido noo gaar ah si loo isticmaalo sida ugu fiican ee alaabta ceyriinka ah loona gaaro saameynta ugu fiican ee ku dhajinta qalabka kala duwan.
Waxyaabaha xiddigteennu ka kooban yihiin waxa ka mid ah xabagta hufan, xabagta cad ee PVA, xabagta loo yaqaan 'SBS all-purpose', iyo Polyurethane Glue Dhanka adeegsiga kaladuwan, waxaan usii horumarinay xabagta cadaadiska leh ee xasaasiga ah ee soosaarida cajalado hufan, xirashada xabagta lagu dhejiyo sanduuqyada waraaqaha, Xabagta Dhuumaha ee samaynta tuubooyinka waraaqaha, xabagta PVC ee tubbada caaga lagu dhejiyo iyo xabagta loo jaro alwaaxda.
Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale bixinnaa alaab ceyriin wanaagsan sida xanjada rosin iyo VAE latex.
Waxaan sumcad ku lahayn adduunka in ka badan 6 sano. Kiimikada 'Desay Chemical' waxay raacdaa siyaasadda "qaadashada tayada wax soo saarka oo ah udub dhexaad, qanacsanaanta macaamiisha sida mabda'a koowaad"